Maninona ny mpivarotra no mila CMS amin'ny Toolkit amin'ity taona ity | Martech Zone
Mpivarotra maro manerana ny firenena no manao ambanin-javatra ny tena tombony azo a Rafitra Marketing Marketing (CMS) afaka manome azy ireo. Ireto sehatra mahafinaritra ireto dia manolotra harena sarobidy indrindra izay mbola tsy hita hatreto mihoatra ny famelana azy ireo hamorona, hizara ary hanara-maso fotsiny ny atiny manerana ny orinasa.
Inona no atao hoe CMS?
A rafitra fitantanana atiny (CMS) dia sehatra rindrambaiko manohana ny famoronana sy fanovana ny atiny nomerika. Ny rafitra fitantanana atiny dia manohana ny fisarahan'ny atiny sy ny fampisehoana. Miovaova arakaraka ny endri-javatra fa ny ankamaroany dia misy ny fanontana an-tranonkala, fiaraha-miasa, fitantanana endrika, fanovana tantara ary fifehezana ny kinova, indexing, fikarohana ary retrieval. Wikipedia
Ao amin'ny 2016 antsika Tatitra State of Marketing Technology hitanay fa ny 83% amin'ireo orinasa ankehitriny dia mampiasa CMS, mametraka azy io ho toy ny rindrambaiko fampiasan'izy ireo mahazatra indrindra. Na izany aza, mpivarotra marobe no tsy mahazo ny tena sanda azo omen'ireo sehatra ireo amin'ny paikadim-barotra sy ROI lehibe kokoa.
Ny fikarohana nataontsika koa dia nanambara fa ny antsasaky ny mpivarotra dia miady mafy amin'ny fampiasana ireo teknolojia ara-barotra mihoatra ny fampiasam-bola voalohany (53%). Miaraka amin'ny CMS manokana, misy zavatra betsaka kokoa amin'ny sehatra noho ny tsapan'ny mpivarotra, noho izany zava-dehibe ny fampiasana ireo fitaovana ireo hanohanana ny famoronana ary hamporisihana ireo mpivarotra hieritreritra ivelan'ny boaty.
Fampidirana ny lakandranon-tserasera
Ny CMS dia mila mamela ny mpivarotra hanome atiny manokana izay manintona ny mpihaino sy ny mety ho mpanjifa, ary koa mamaly ny hetahetan'ny mpampiasa azy ireo. Satria ny mpanjifa izao dia mifampiresaka amin'ireo marika amina karazana fitaovana isan-karazany amin'ny fotoana samihafa, ny fidirana amin'ny cross-device sy ny fampidirana ny fantsona dia zava-dehibe saingy mety ho sarotra izany. Ny tatitry ny taona 2016 dia nahita izany antsasaky ny mpivarotra (51%) manana fahasarotana mamaly ireo fantsona na fitaovana vaovao, manasongadina fa tsy mora foana ny mampiditra azy ireo amin'ny paikadim-panovana CMS.
Mba hahatratrarana dian'ny mpanjifa tsy misy tohika izay ahafahan'ny marika manome izay tadiavin'ny mpanjifa, isaky ny maniry izany izy ireo dia tsy maintsy ataon'ny mpivarotra laharam-pahamehana ny paikadim-pitaovana marobe. Izany dia mitaky haavon'ny fahatakarana tsara kokoa, midika izany fa ny mpivarotra dia tokony manomboka manadino ary mampihatra ny fahaiza-manao ilain'izy ireo mba hahafahany mitrandraka am-pahatokisana io fitaovana io amin'ny antony mety. Io dia hahafahan'ny marika hanaiky ny maha-zava-dehibe ny CMS amin'ny paikady sy tanjona manatsara.
Fampiharana lojika amin'ny CMS
Raha toa ka tsy manome an'ity traikefa mirindra sy tafiditra ao anaty natiora ity ny tranokalan'ny marika iray, dia miseho ny fahafahan'ny mpanjifa mijery any an-kafa raha tsy afa-po amin'ny serivisy. Fikarohana nataon'i Verint sy IDC nahita fa ny vanim-potoana niomerika dia nanjary nanahirana kokoa ireo marika hihazona ny mpanjifa satria ny fanavaozana ny teknolojia dia miteraka safidy sy fotoana mety kokoa ho an'ny mpanjifa.
Mba hiantohana ny dian'ny mpanjifa tsy misy tomika, dia ilaina ho an'ny CMS ny mandeha tsara rehefa ampiasaina miaraka amin'ireo sehatra hafa, toy ny rafitry ny Customer Relation Management (CRM). Ny mpanjifa dia tokony ho ivon'ny fanapahan-kevitra momba ny varotra ary tsy misy hafa amin'izany rehefa mieritreritra tetika CMS iray. Ireo fitaovana dia tokony hampidirina ao amin'ny fikambanana mba hifaneraserana amin'ny mpanjifa amin'ny fotoana tena izy, hanovana ny mpitsidika ho mpanjifa miverina ary hamela ny ekipa marketing hanatsara sy handinika ny toetran'ny mpanjifa. Ity fahitana sy fahaizana ity dia azo ampiasaina amin'ny asa aman-draharaha, mametraka ny ekipa marketing ho foibem-pahalalana fatratra manerana ny orinasa.
Ny mpanjifa eo afovoany
Ny fahafaha-mamoaka atiny mirindra, azo atao raha tsy eo afovoan'ny paikadin'ny CMS ny mpanjifa. Amin'ny fametrahana ny mpanjifa ho lohalaharana, ny mpivarotra dia tsy maintsy mahatakatra tsara ny karazana atiny tadiavin'izy ireo. Ity haavon'ny personalization ity dia azo tanterahina amin'ny alàlan'ny famakafakana na fampidirana ao anaty vokatra. Izy io dia hanaparitaka ny fomba fijery manerana ny orinasa, ahafahan'ny ekipa sy fizarazarana samihafa hanangana atiny izay mifandraika indrindra amin'ny mpanjifany sy ny mpiray antoka aminy.
Amin'ny alàlan'ity tetika ity amin'ny paikady CMS, dia hamela ny halavan'ny atiny, amin'ny famaritana izay mahaliana amin'ny ho avy azo jerena, ary koa ny ankehitriny. Ity atiny manokana ity dia azo zaraina manerana ny asa aman-draharaha ivelany sy any ivelany ho an'ny mpanjifany sy ny mpanjifa, manerana ireo sehatra teknolojia isan-karazany. Io dia hahafahan'ny orinasa mampiasa ireo fantsom-bola rehetra nandaniany vola rehefa mifampiresaka amin'ireo mpampiasa amin'ny dingana rehetra amin'ny fanapahan-kevitra raisin'izy ireo.
­­­­­­­­­­­Zava-dehibe kokoa noho ny hatramin'izay ny mpivarotra antoka fa mihetsika tsy tapaka amin'ny fiovana eo amin'ny sehatry ny nomerika izy ireo. Tokony hanana fahatakarana feno ihany koa izy ireo rehefa mampiasa fitaovana sy lampihazo ankehitriny sy vaovao. Ny fihetsiky ny mpanjifa dia miovaova hatrany ary amin'ny alàlan'ny fampiasana ireo fitaovana manodidina an'izay dia afaka mijanona dingana roa mialoha hatrany ny mpivarotra amin'ny fotoana rehetra.
Tags: CMSfampidirana cmsfitantanana votoatyrafitra fitantanana atinyCRMfampidirana ny fantsonafifandraisana amin'ny mpanjifafamaritanaidcsquizverintinona nyinona ny cms
Ahoana ny fomba hanatsarana ny lahatsoratra-fahalalana-fototra